ပေါက်ကရ ကဗျာ ပျော်စရာ | မိုးချိုသင်း မှတ်တမ်း
ကဗျာလေးတွေကို စားမြုံပြန်သွားပါတယ် အစ်မ။း)
အစ်မချိုသင်းရေ..အမြဲရောက်ပေမယ့် ခုမှ ပထမဆုံးစပြီးကွန်မန့်ပေးတာမို့ အမှားပါရင်ခွင့်လွှတ်ပါ။
ရေထဲကျ ငါးပြေမ (ပြီးတော့ဆက်လိုက်သေးတယ်)
စာနဲ့နီးစပ်တဲ့အသိုင်းအ၀ိုင်းကလဲ မဟုတ်တော့ မှားကောင်းမှားနိုင်ပြီး၊ရိုင်းတောင်ရိုင်းနေဦးမှာ..။
ညီမလဲ တနင်္လာဆိုတော့ ကိုယ့်နေ့ပဲ အကောင်းပြောပြီး သူများကိုအဲ့လို နောက်ရတာကိုက
ဘွတ် ရွှတ် ဒိုင်း………
ရန်ကုန်မြို့.ကို..ဆက်ပါအုံး..
ကဲ မောင်နှမတွေ မွေးရက်တူနေပြီ ဘယ်လိုလဲ...
အမရေ ဒီငယ်ဘဝလေးတွေကို ပြန်တွေ ကြည့်ရင် ကြည်နှုးမှုတွေ အပြည့်နဲ့ပေါ့
ဒါပေမယ့်လည်း ပြန်ယူလို့ လည်းမရတော့ ပြန်တွေးပြီး ကြည်နှုးနေရတော့တာပဲ
လေတွေ မိုးတွေ တိုက်ပါလို့၊ ကဆုန်လပြည့်ကျော်
ငိုရီ ငိုရီ ဆန်တစ်ပြည်၊ ငိုမဲ့ငိုမဲ့ ဆန်တစ်ခွက်။
တစ်ခုခုလုပ်မိလို့ လူကြီးကို တိုင်မယ်ပြောရင်
"တိုင်တစ်လုံး တစ်မတ် ၊ နင့်ပါး ငါချ.. ဂွပ်.. "
တစ်ခါပဲပြောခဲ့ရတယ်..။ တကယ်သွားတိုင်လိုက်လို့ ကိုယ့်အစ်မကို "နင့်ပါးငါချ" ပြောတဲ့အပြစ်နဲ့ ဆူခံလိုက်ရတာ....။
ဒွတ်ခ... ပေါက်တတ်ကရတွေ မှတ်မိနေတယ်.. တော်မှပဲ။
ကျောင်းပြေး ကျောင်းပြေး နှုတ်ခမ်းမွေး
ချည်ကြိုး ချည်ကြိုး(ခြေကျိုး လားမသိပါ) တုတ်နဲ့ထိုး။
နောက် ကေလည်း လာထောက်ခံလိမ့်ဦးမယ်း)
Ah Ma yal.....
Chit sayar kg ag yay tat lite tar...
Ah Ma sar twe phat tine, sate nyit tar twe pyawt pyawt twer dae. Ah Ma yat Di post lay phat p Nge Bawa ko tha di lal ya twer dae. P tot khu so, ae di ah than twe ko di mhar ma kyar ng bu lay, ta myo gyi pae.
အောင်မာ တနင်္လာကျား အီးတွေချား ကိုများ..
အဲဒီကဗျာလေးတွေ အကုန်ရွတ်ဖူးတယ်။ :)
တနလာင်္ ကျား၊ နတ်ပြည် သွား...တဲ့
မချိုသင်းကလည်း သူ့ နေ့ ကျတော့ အကောင်း။
ဟွန်းးးး ဘယ်ရမလဲ ..
တနလာင်္ကျား ၊ -ျီးတွေစား ။
ဗုဒ္ဒဟူးဆင် ရွှေပုံတင် ...(ဟဲ ဟဲ)
ရွာငယ်ဇနပုဒ် မီးလေးမှိတ်တုတ် .
ဟိုကလဲ ပဲ ပဲ
ဒီကလဲ ပဲ ပဲ ..ပဲ ပဲ ပဲပဲ..
ခုတော့ ရွာကြီးတောင် မီးမရှိပူးးးးးးးးးးး
ငယ်ဘဝလေးကို လွမ်းသွားတယ်..း)
ဒါမျိုးတော့ စိတ်ဝင်းစားတယ်မောင် ..
နောက်တခုက သေချာမမှတ်မိတော့ဘူး ..
ခြေကျိုး ခြေကျိုး အပ်နဲ့ထိုး .. ဆိုတာလေ၊ ဘယ်သူများ မှတ်မိကြလဲ။
ပုဇွန်ဇိပ် . .ဇိပ် မောင်ရင်လာ တံခါးပိတ် .. ဂျိပ်
ကျီးဖြူကျီးမဲ ၂ ကောင်ထဲ
ချစ်စရာကောင်းသလို အဓိပါယ် အပြည့်ပါတာလေးသတိရတယ်
" စာကလေးနှစ်ကောင် မင်္ဂလာဆောင်
ခြင်ထောင် ထောင် မီးခွက်မှုတ်
ကျလိ ကျလိ လုပ် " တဲ့
ကလေးဘ၀တုံးကလဲကြိုက်ခဲ့ လူကြီးဘ၀ရောက်တော့ ကဗျာစပ်တဲ့သူကို အထင်ကြီးခဲ့တဲ့ကဗျာလေးပါ..
ကျလိ ကျလိလုပ် " တဲ့
စဉ်းစားမိတိုင်း သဘောကျတယ်။ ဟဲဟဲ
တပြား နှစ်ပြား ပဲလင်ပြား၊ ပြားလက်စက္ကူအလံထူ၊ ထူထူထဲထဲ ပိုးတောင့်တဲ၊ ပဲရေသောက် နို့ရေသောက်၊ တောက်တီးတောက်တဲ့ ပဲလဝါ၊ ကဒါကဒီး အောက်ကိုစီး၊ မိမိရွှေတောင် ပိုးရွှေကောင်၊ ရွှေကောင်တစ်ဖက် လက်ဝဲ တစ်ချောင်းထွက်။
အုန်းသီးတစ်လုံး၊ မလေးလုံး၊ တစ်လုံးဆွမ်းတော်တင်၊ တစ်လုံးရေထဲကျ၊ ငါကောက်လို့ရ၊ ရော့.. ဝေစားကြ
(ကိုတင်မင်းထက် မန့်တာဖတ်ပြီး သတိရသွားတာ..)
အဲဒါလည်း အော်ဆိုဖူးတယ်။ :D
ရေထဲကျ ငါးပြေမ .. ကဗျာလွဲရင် ကျန်တာ အကုန်လုံး အခုထိရတယ် မရေ...
အခုလို ပြန်ဖတ်ပြီး စိတ်ထဲက ရွတ်ရတာတင် ပျော်ဖို့ ကောင်းလိုက်တာ။
အစ်မက ကဗျာလေး တွေကိုတော်တော် မှတ်မိနေတာပဲ။ ကျွန်တော်တော့ မမှတ်မိတော့ဘူး.... အစ်မစာမရေးတာကြာသွားတယ်နော်။
i agree wt "တနလာင်္ ကျား၊ နတ်ပြည် သွား"
i was born on Monday too :)
စကားပီမပီ ရွတ်တာလေးတွေ ရှိသေးတယ် ..
၁။ တုံးအောက်ကဖား၊ ဖောင်းတဲ့ဖားကဖောင်း၊ ပြားတဲ့ဖားကပြား။
၂။ ရွှံ့ပေါ်ရှဉ့်ပြေး၊ ရှဉ့်မွှေးရွှံ့မလူး
၃။ တောင်ပေါ်ကရှမ်းကလေး၊ လျှော်ထမ်းလို့ပြေး
နတ်ပြည်သွားမယ့် ကျားတွေ နတ်ပြည်ဆိုတာ
စန့်စန့်ကြီးနဲ့ ခန့်ခန့်ကြီးသွားရတာ :P
ဟုတ်ပါ့ မနော်ရယ်- တနင်္လာတွေကလေ.. အဲဒီလို..ချစ်ဖို့ကို ကောင်းတာ..အဟဲ။
ကဲကဲ..ဇီဇ၀ါ လုပ်တာနဲ့ ကျမလဲ ရေးရတော့မယ်။ အမချိုသင်းကို စောင့်နေတာ။ ( ကဗျာဆရာကြီး သမီး က..ဘယ်လို ပေါက်ကရာ ကဗျာတွေ ဆိုခဲ့သေးလဲ သိချင်လို့)း)
ကဗျာတွေက..တော်တော်တူပါတယ်။ ညစ်တီးညစ်ပတ် ကျပုံခြင်းလေးတွေသာ နဲနဲကွာတာ။
ယုန်လေးက..နားရွက်ထောင်ကတော့..ကျမ ရဲ့ပထမဆုံး ပွဲတက်ကဗျာလေ။း)
မမရေ ရီလိုက်ရတာ ဆိုတာ။
comment တွေထဲမှာတော့ စင်စင် ရေးထားတာတွေ အရီရဆုံး...
စာရေး စာဖတ် ဘာလုပ်ဖို့
ပေါက်ကရ ကဗျာတွေက သူများဆိုလို့ ကုန်သလောက်ရှိနေပြီမို့ ပေါက်ကရ မဟုတ်တာဘဲ ကောက်ဆိုလိုက်တယ်။
(သူငယ်ချင်းတွေ ပြောတဲ့ အကြောင်းအရာ ကိုယ်လိုက်မမီရင် အဲဒီကဗျာ ကောက်ရွတ်ပေးလိုက်တယ်)
မချီပါနဲ့ကိုကြက်တော
အင်္ဂါ ဗုဒ္ဓဟူး၊ ဖင်မှာတုတ်(ဒုတ်)စူး
၀င်းဦးက မနေနိုင် ခင်သန်းနုကိုတိုင်
ဆိုပြီး အော်လိုက် နောက်လှည့်ကြည့်ပြီး
လှုပ်တဲ့သူကို ဖမ်းလိုက် လုပ်ခဲ့တာ
ခလေးဘ၀က မမေ့နိုင်စရာ ကဗျာလေး။
အပျိုကြီးတွေ လင်မရလို့လန်ဒန်မြေပဲယို..
မှတ်မိအောင် သင်ပေးတဲ့ ကဗျာလေးကိုလဲ
မမ ညှိုးမနေပါနဲ့ ၊ လည်လည်သွားမယ်
သန်းသန်းလဲ ချန်မထားနဲ့ ။
ငယ်စဉ်ကလေး ဘ၀ကို ပြန်ရောက်သွားစေတဲ့
ဒီ post အတွက် ကျေးဇူးပါ ချိုသင်းရေ။
အခါအခွင့်သင့်တိုင်း မြန်မာ့ဓလေ့ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုတွေ ရွတ်ဆိုပြတတ်တဲ့
ချိုသင်းဖေဖေ ကိုလဲ လွမ်းမိပါတယ်။ KM
*** တောင်ငူတက္ကသိုလ်ကို ပြောင်းသွားရတဲ့ သူငယ်ချင်းဆရာမက ငါတို့ ခု ညောင်ပင်တစ္ဆေတွေ ဖြစ်ကုန်ပြီတဲ့..။ သူတို့ကျောင်းက ညောင်ကိုင်းရွာမှာ သွားဖွင့်ထားတာတဲ့....။
၀ိုင်းကြီးဝိုင်းကြီး ဘယ်လောက်ကြီး၊ ဟောဒ်ီလောက်ကြီး။
မမခြင်ထောင် ဘယ်လောက်ပေးရတယ်။ ငါးမူးတစ်ကျပ်ပေးရတယ်။
မရောင်းနိုင်ဘူး၊ မေမေဆူလိမ့်မယ်။ မေမေဆူရင် တို့ဆီပြေး ဝိုင်းကြီး ပတ်ပတ် ဒူဝေဝေ
(အဲဒါက ဝိုင်းကြီး ပတ်ပတ် ကစားမှ ဆိုတာမဟုတ်လား)
ဒီတခါ နောက်ဆုံးပါပဲ :D
ည ည ထလို့ခုန်၊ ကြမ်းတွေကျိုးကုန်
မကယ်နိုင် ထဆင်ထူးဝ လုံး ၂ လုံးပြူး
ညီအမ ၂ ယောက် _င်ကကောက်
တစ်ပြား နှစ်ပြား လင်ပန်းပြား၊
ဒေါင်ဒင် နင်တစ်ဖက် ငါတစ်ဖက်၊
ထွက် လိုက် ကြ စို့ မောင် မင်း ကြီး လက် တစ် ဖက် ထွက်။
လက်ဖဝါးလေးတွေကို ထောက် ထောက်ပြီးဆိုတာလေ အမ။ နောက်ဆုံး 'ထွက်' ကျတဲ့လက်က ထွက်ရတယ်။ ပထမပိုင်းက ပုံမှန်ဆိုယင်း ထောက်သွားတာ။ နောက်ဆုံးစာကြောင်းကတော့ စကားလုံးတစ်လုံးကို လက်ဖဝါးတစ်ခုနှုန်းနဲ့ ဖြေးဖြေးချင်း ရွတ်ရတယ်။ နောက်ဆုံးကျန်နေတဲ့ လက်ပိုင်ရှင်က ခေါင်းငုံ့ရတယ်လေ။
သာအေးနေရာမှာ ကိုယ် စ,ချင်တဲ့သူရဲ့ နံမည်ထည့်ဆိုတာအမ။
ဟတ်ချိုး ဟတ်ချိုး ဟတ်ချိုး။
ဒီကဗျာလေးက ကစားတဲ့သူတွေအားလုံး လက်တွေတွဲထားပြီး အဝိုင်းကြီးလုပ်ပြီး ဆိုကြတာ။ ဝိုင်းကို ကဗျာစာသားအတိုင်း ကြီးလိုက် သေးလိုက် လုပ်ကျတာ။ နောက်ဆုံး ဟတ်ချိုးဟတ်ချိုးလဲဆိုရော လက်တွေတွဲထားရင်းနဲ့ ခုန်ကြတာ။ ပျော်စရာ အရမ်းကောင်းတယ်။ ငယ်ငယ်က ဘဝလေးကို လွမ်းလိုက်တာအမရယ်။
ငယ်ဘ၀လေးကို အရမ်းသတိရမိပါရဲ့ ..ဒါပေမဲ့ ခုခေတ်ကလေးတွေကတော့ ကိုယ်တို့ ငယ်တုန်းကလို ဘ၀မျိူးတွေနဲ့ ဆော့ဖူးမှာမဟုတ်ဘူး... ကိုယ့်တူလေး၊တူမလေးတွေက.. တီတီတို့ငယ်ငယ်တုန်းက တီဗီလည်းမရှိ၊ ကွန်ပြူတာလည်းမရှိဆိုတော့ ဘာလုပ်နေကြတုန်းတဲ့....
သူတို့ ကို ကိုယ်တို့ ငယ်တုန်းက မျောက်ရှုံးအောင်ဆော့တဲ့ အကြောင်းတွေပြောတော့..အဲလိုကစားချင်လိုက်တာတဲ့.. ဒါပေမဲ့ အဲလိုမျိုးတွေ ကစားဖို့သူငယ်ချင်းမရှိဘူးတဲ့.....တကယ့်ကို ပျောက်ဆုံးသွားသော နိဗာန်ဘုံ ဘဲနော်.....
ကျွန်တော်တော့ သိပ်မမှတ်မိတော့လို့ မှတ်မိတဲ့သူတွေ ရေးသွားတာကို ဖတ်ပြီး သဘောကျသွားပြီ
မင်းတာက ငါ (ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် “မင်း” လို့ပြောတယ်ထင်တာပဲ)
သေချာမမှတ်မိတော့ဘူး။ အစလည်း မမှတ်မိတော့ဘူး။
အစ်မပို့စ်ရော ကွန်မန့်တွေရော အကုန် ကောင်းတယ်။း)
စကားမစပ် kiki ပြောတာကမှ အမှန်။ :P
အပေါ်က ကိကိ ပြောသွားတာ သဘောတူပါတယ်...
တို့ရွာနောက်ဖေး ချောင်းရိုးမှာ -ျီးတုံးလေးတွေ
နောက်ပိုင်းမေ့ကုန်လို့ သိသူရှိရင် ဖြည့်စွက်ပေးပါ...
ဂတုံး ဂတုံး တယ်လီဖုန်း...ရန်ကုန်မြို့ ကိုဆက်ပါဦး
ဆယ်နာရီမှာ ဖုန်းကြိုးပြတ် ကတုံး-င်မှာ စက္ကူကပ်...
ဘုတ်ဆုံ ဘုတ်ဆုံ မဘုတ်ဆုံ
မဘုတ်ဆုံ တင်ပဆုံကြီး လှည်းလုပ်လို့စီး ဘုတ်အီး....
ကောင်းလိုက်တဲ့ ကဗျာတွေ ကော်မန့် ပေးသူတွေက ပြန်ရေးတဲ့ ကဗျာတွေလည်း အရမ်းရီရတာပဲ။ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အချိန်တော်တော်ပေးလိုက်ရတယ်... တန်ပါတယ်...မမချိုသင်းအပါအ၀င်..အားလုံးရေးထာတဲ့ ကဗျာလေးတွေ ရွှတ်ကြည့်ုလိုက်၊ သဘောကျလိုက်... ကိုယ်ငယ်ငယ်က ဘာဆိုခဲ့ပါလိမ့် ပြန်စဉ်းစားလိုက်နဲ့....း))
ဘာ.. အခုမှလာပြီး ကြောက်ပါပြီလဲ...
ငယ်ငယ်က ဆိုးတာ ခွင့်လွှတ်လို့ရပါတယ်..
ကြီးမှ မိုက်ကန်းနေကြတာသာ ဆိုးလွန်းတာ...
Talkii ကဗျာနဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်
တစ် .... နှစ် ......၊ သုံး.......
စနာ က ဇော်လင်းမိန်းမ
မ တာက ဘိုးဘိုးအောင်
ပွဲ တာက သီတင်းကျွတ်
ခြည် တာက ကြိုး
ကျိုး တာက လက်
ကြောက် တာက သရဲ
သွေး တာက သနပ်ခါး
ခါး တာက ဆေး
ဆေး တာက ရေ
တစ်၊ နှစ်၊ သုံး.....
တောင်ပေါ်က ရှမ်းကလေး လျှော်ထမ်းလို့ ပြေး
တိုတဲ့ လျှော်ကတို ရှည်တဲ့ လျှော်ကရှည်..
ဘီးလူး ကတုံး နှစ်ကောင် ဒူးနှလုံးထောင်..
I know , you know
သူခိုး မခိုးနိုင် ။
တစ် တက် တစ်တက် တောက်
နာရီပေါ် ကြွက် ကလေးလျှောက်
ငါးကလေး တကောင် ဖမ်းမိတယ်
ကျတော့ လက်ကို သူကိုက်တယ်
အာ လာ လား ... အာ လာ လား
တနလာင်္ကျား နတ်ပြည်သွားကို အပြတ်အသတ်ထောက်ခံပါ၏.. ခင်မင်းဇော်လည်း ထောက်ခံပါလိမ့်မည်..။ ဟီဟီ...
ပေါက်ကရဆိုရင်တော့ သတိရတာတခု ပြောပေးဦးမှ..
နန်းတော်အောက်က တစ္ဆေခြောက်.. ၀င်းဦး နှုတ်ခမ်းမွှေးပေါက်..။
ဟီဟိ.. ၀င်းဦးခမျာ မဆီမဆိုင်။ ပြီးတော့ အဲဒါက ညစ်တီးညစ်ပတ်အဓိပ္ပါယ်ထင်တယ်.. အဲဒါအော်ဆိုရင် လူကြီးတွေ ဆူတယ်လေ..။
ပင်လယ်ရေ ဘယ်မခမ်း မထွေးအမိဖမ်း။ ဒါကတော့ ကစားရင်းဆိုတာပေါ့နော်..။ အမှတ်ရစရာပေါက်ကရလေးပါပဲ။ :)
ငကွ ကတဲ့ပွဲ ငကွပွဲ...
ကိုယ် ငယ်ငယ်က ဆိုခဲ့ဖူးတာတွေတော့
ကဗျာလေးတွေ အကုန်လုံးကို ရင်းနှီးနေတယ်။ တူတူပဲ အစ်မရေ။
ဖေဖေလာရင် အရက်နဲ့ မြည်းကြမယ်။
အဲဒါ ငယ်ငယ်က ပြောင်ပြီး ဆိုခဲ့တဲ့ ကဗျာ။
နောက်ပြီး ကျောင်းမှာ အသင်းအချင်းချင်း နောက်ပြီး ဆိုကြတဲ့ ကဗျာတွေ မှတ်မိသေးတယ်။
ကျန်စစ်သား နဲ့ ဗန္ဓုလ ကတော့ ရိုင်းလို့ ဆိုမပြတော့ဘူး။ :D
ငယ်ငယ်က ပေါက်တတ်ကရ ဆိုခဲ့တာတွေ အားလုံး ၀ိုင်းပြီး ရေးထားကြတာ ပျော်စရာကြီး... အမချိုသင်းရေ ငယ်ငယ်ဘ၀တွေကို လွမ်းလိုက်တာ
ဉာဏ်ကနဲနဲထူတော့ကဗျာဆိုအလွတ်ရဖို့တော်တော်ခဲရင်းတယ်။ Logic နဲ့ မှတ်ရတာတို့ အကျိုးအကြောင်း ဆက်စပ်မှတ်ရတာလို့လောက်ပဲ မှတ်မိလွယ်တယ်။ မမိုးချိုသင်းကိုတော့ချီးကျူးရမယ်။
dunt let me down pl3453 said...
မိုး မိုးဘာလို့ရွာ ဖားအော်လို့ရွာ
မြွေမြွေ ဘာလို့ကိုက် ဖားအော်လို့ကိုက်။
တိုင်တလုံး ငါးပြား နင့်ပါးငါချ ဗျတ် ဗျတ် ဗျတ်။
ဆိုင်လားမဆိုင်လားမသိ..အိမ်ကျိုအိမ်ကျား အိမ်အောက် အိမ်ခေါင်မိုး သစ်ပင်ပေါ် နေရာစုံအောင်ပုန်ပီး တဒိုင်းဒိုင်းနဲ့ ပစ်၇တဲ့ပချပ်သနတ်ပစ်တမ်းကစား၇င်ရွတ်တာလေးလည်းကြည့်အုံးးနော်..
မိနစ်၂၀ဆယ်လောက်ကြာတယ်...စင်းစား၇တာ အေ၇းထဲ လာလာချက်တာလေးတေကပြန်ဖြေနေတော့
ချိုသင်းရေ... အမလဲ အဲလိုဆိုခဲ့တာပဲ...ဟဲဟဲ... တူပြန်ပြီနော်...
မချိုသင်း ကလေးဘ၀ကို သွားတော့လဲ အားလုံးက တက်ညီလက်ညီသွားလို့ပါပဲလား။ ကျနော်တော့ ငယ်ငယ်တုန်းက ကျနော်တို့တွေ ကလေးဘ၀ အချင်းချင်း စိတ်ဆိုး စိတ်ကောက်တဲ့အခါ ကလေးဆိုတော့ သိပ်လဲ ကြာကြာ မနေနိုင်ပါဘူး။ ဒါနဲ့ တယောက်က ပြန်စခေါ်ချင်နေပြီ။ ဒါပေမယ့် နောက်တယောက်ကျတော့ ခပ်တင်းတင်းပဲ။ အဲဒီမှာ စကားကလဲ ပြန်မပြောချင်သေးတော့ စောင်းပြောသလို ဆိုတဲ့ ကဗျာပြောင်လေး တခု သတိရမိတယ်။ အပေါ်မှာ ရေးသွားလဲ မတွေ့မိသေးဘူး။ ကဗျာက နည်းနည်းတော့ ရင့်သလိုလိုတော့ ရှိသား။ ဘာတဲ့...။
အိမ်သာထဲမှာ ဘယ်ကငပိက ဘယ်လိုရှိပြီး အားရှိတာလဲတော့ မသိဘူး။ ကလေးတုန်းကတော့ တော်တော်လေးကို ဆိုခဲ့ဖူးတာပဲ။ :D
ဟိတ်ကောင်မလေး နင့် fင်မှာပွေး မြွေ၂ကောင်နဲ့တွေ့တော့ ခုန်ဆွခုန်ဆွပြေး...
(မှတ်ချက်။ ။မြွေ၂ကောင် ပွေးယားနာပျောက်ဆေး)
အားလုံး စည်းစည်းရုံးရုံးနဲ့ တနိုင်တပိုင် လက်စွမ်းပြ လိုက်ကြတာ... စောစောပိုင်းက သမီးလေး ဘလော့ဂ်လည်ရင်း တခွီခွီ ဖြစ်နေရခြင်း အကြောင်းရင်း အခုမှသဘောပေါက်တော့တယ်၊ ဘာလေးပဲရေးရေး ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ချိုသင်းေ၇ မျှော်ရကြိုးနပ်ပါတယ်။ ချိုသင်းတင်မဟုတ်ဘူး တပျော်တပါးကြီး ပါဝင်ဆင်နွှဲ သွားကြတဲ့ပညာရှင်တွေကိုလည်း ချစ်ခင်စွာ မှတ်တမ်းတင်သွားပါတယ်။
အမချိုသင်းဆီမှာရော မကေဆီမှာရော ကဗျာတွေ ရေးထားတာ ပြန်ဖတ်ရတာ ပျော်စရာကြီး.. စိတ်ထဲမှာ ပြန်လိုက်ဆိုရင်း ငယ်ငယ်တုန်းက လို အကျယ်ကြီး အော်ဆိုချင်စိတ်တွေ ပေါက်တယ်.. အမတို့ တော်တော်မှတ်မိတယ်နော်.. :)
ရေးထားတာတွေ တော်တော်စုံနေပြီ။ ရယ်ပြီးပြန်သွားပါတယ်။
အင်္ဂါခြင်္သေ့ ဘုရားရှေ့ မဟုတ်ဘူးလား ခင်ဗျ။
အီး ဒူ ဒင်၊ သှူ့နှာခေါင်းဝင်၊ ငါ့နှာခေါင်းဝင်၊
တောက်ကျိုးနည်း ပေါက်တဲ့ fင်။
အီး အီး ဘယ်သူပေါက်၊ မောင်ပေါက်၊ ပေါက်တဲ့သူ မှန်မှန်ပြော၊ အီးပုတ်တရားဟော၊ ဟောလို့မကျေ သံပုရာရေ၊ ဒိုင်း ဘွတ် ရွှတ်....။
ထိုင်ကစားနေကြရင်း အီးစော်နံရင် တရားခံရှာတဲ့ ကဗျာ၂ပုဒ်၊ ရွတ်ရင်း တစ်ယောက်စီကို လက်ညှိုးထိုးသွားတာ ကဗျာအဆု့းမှာ လက်ညှိုးကျတဲ့သူ အီးတရားခံ။
.. ၀င်းဦးနဲ့ ၀ါဝါ၊ လမ်းလျှောက်လို့လာ
၀င်းဦးက မခံနိုင်၊ ရဲသားကြီးကိုတိုင်
ရဲသားကြီးက အပြစ်ပေး၊ ၀င်းဦးနှုတ်ခမ်းမွှေး.. တဲ့
2 peace ဆိုတာ..
စိတာက သွား..သွားတာက ခြေထောက်
ထောက်တာက လက်..လက်တာက ကျောက်
သီးတာက သရက် ...ယက်တာက ချည်
ချီတာ က ကလေး လေးတာက ကျောက်တုံး
ငယ်တုန်းက မောင်နှမတွေ စုပြီး ခြေထောက်လေးတွေ ဆန့်ထား၊ စက်ဝိုင်းပုံလေး ၀ိုင်းပြီး ခြေထောက်တွေကို အလယ်မှာ စုထား၊ တစ်ယောက်က မျက်စိမှိတ်ပြီး ခြေထောက်တစ်ခုကို ဖမ်းဆုပ်ထားပြီးရင် ဒါဘယ်သူ့ခြေထောက်လို့ မေးရင် ကျန်တဲ့သူတွေက မောင်ရင်ခြေထောက်၊ မောင်ရင်ဘယ်သွား၊ ဆွမ်းခံသွား၊ ဆွမ်းဆွမ်း ဘယ်မှာ၊ ကြောင်စားကုန်ပြီ၊ ကြောင်ကြောင်ဘယ်မှာ ဖျာတလိပ်နဲ့ မိုးပေါ်တက်သွားပြီ ဆိုပြီး မျက်စိမှိတ်ထားတဲ့သူကို ကျန်တဲ့သူတွေက ဒါဘယ်သူ့ခြေထောက်လို့မေးရော။
အဲ့ဒီအခါကျ မျက်စိမှိတ်ထားတဲ့သူက ဘယ်သူ့ခြေထောက်ပါဆိုပြီး အဖြေကို ပြန်ပြောရတာလေးကို သတိရတယ်။
အမမိုးချိုဘလော့ဂ်မှာ ၀ိုင်းပြီးရေးပေးကြတဲ့ ကဗျာလေးတွေ ဖတ်ရတော့ ငယ်ငယ်လေးတုန်းက ပေါက်ကျော်မ လုပ်ခဲ့တာတွေကို လွမ်းလိုက်တာ
မအယ် ရွတ်တဲ့ ကဗျာတွေက ဆင်ဆာ မလွတ်လို့ မရေးတော့ ဘူး။
ကော့မန့် တွေက ရီရတယ်။
စင်စင်ရေ ဘလော့လေး တခုလုပ်ပါဗျိူ့ ။
ကဗျာတွေေ၇ာ ကော်မန့်တွေ ရောဖတ်တာ ရီလိုက်ရတာ..
တို့ရွာသားတွေက ပြောတယ် အဲဒိစာတွေက ဒေါသသင့်နေတယ်တဲ့ ပေါက်ကရကဗျာ ပျော်စရာကို ပြောတာနော် ထားပါတော့ ရွာကလေးကို အလည်လာပါဦး http://four-8km.blogspot.com/
သူနဲ့လဲမခေါ်ပဲ ငါနဲ့လဲမခေါ်ပဲ မခေါ်ပဲနဲ့
စားတော်ပဲ ပဲကြီးလှော်နဲ့ လဲ ဗြဲးးးးးးးးးးးးး
ကျွန်တော်တို့ကတော့ အဲ့ဒိလိုဆိုတာပဲ။း)
ဟေး ဟေး ဟေး
ငါ တို့ ငယ်ငယ်တုန်းက အဲဒီလိုမျိုးလည်း ကစားခဲ့သေးတယ်။ :)
ဒီလိုမျိုးရော အော်ခဲ့ကြသေးလား ??????
၁၆ တစ်လီ ၁၆
၁၆ နှစ်လီ ပဲပြုတ်
ပဲပြုတ်ကို ဆီ ဆမ်း ဇော်ဝမ်း
ဇော်ဝမ်း က အိမ်ပေါ်တက် တင်တင်ညို နဲဖက်
တင်တင်ညိုက ကလေးမွေး အောင်ထွန်းလေး။
ဟားဟားဟား မမချိုသင်းရေ...တနင်္လာကျား နတ်ပြည်သွားတဲ့ ကောင်းလိုက်တာ ဂွတ်လိုက်တာ။ အနော်ငယ်ငယ်က မသိခဲ့ဘူး ။ တနင်္လာကျား အီးတွေစား အင်္ဂါခြင်္သေ့ဘုရားရှေ့ဆိုပြီးအင်္ဂါသားသမီးတွေက စလာတိုင်း ဒေါသတွေ အတောင့်လိုက်အလိပ်လိုက်ထွက်လာရတာ
ခုတော့ ရပြီ။ တနင်္လာကျားနတ်ပြည်သွားးးးးးးးး
ယိမ်းတဲ့ ဘက်ကို ငါလိုက်မယ်
လိုက်ကွယ်(အဲဒါလေးကတော့ ကျောင်းမှာ မုန့်စားဆင်းချိန်မှာ ဆော့တဲ့စာကလေးဖမ်းတဲ့ကဗျာ)
လက်ချင်းဆိတ်ပြီးဆိုမိတာက ပုစွန်ဆိတ် ပုစွန်ဆိတ် မောင်ရင်လာ တံခါးပိတ်ချိတ်....
ကဗျာတော့ မဟုတ်ဘူး။ ကစားနည်းလေးပါ။ ဒါပေမယ့် ပါးစပ်က ပေါက်ကရ ရွတ်ရတာ ပျော်စရာပါ။
၁။ မဂျာရူး ကစားနည်း
ခွေးရူး က အရူးမ မဂျာရူး၊ ကျန်ကလေးများက အရူးမ ကို စသူများ
မဂျာရူး။ ။ ဂျုံး...ဂျုံး...ဂျုံး...
ကလေးများ။ ။အိမ်ရှေ့က ဘယ်သူတုန်း။
ကလေးများ။ ။ကျားတွေ၊ဆင်တွေ ကိုက်မှာစိုးလို့။
မဂျာရူး။ ။မလိုက်ချင်နေ၊ သွားမယ်။
ကလေးများ။ ။မဂျာရူး နေပါဦး။ မဂျာရူးနေပါဦး။
မဂျာရူးက ပြေး။ ကလေးတွေက မဂျာရူးနေပါဦး ကို မနားတမ်း အော်ရင်း နောက်က လိုက်ပြေး။ ခဏနေတော့ မဂျာရူးက စိတ်တို။ ကလေးတွေကို ပြန်လိုက်ဖမ်း။ ကလေးတွေက ထွက်ပြေး။ မိတဲ့ကလေး ခွေးရူးဖြစ်၊ မဂျာရူးလုပ်။ ကစားနည်း ပြန်စ။
၂။ ဆီမီးခွက် ကစားနည်း
ကလေးသုံးယောက် ၁၂၀ ဒီဂရီခြားစီ မတ်တပ်ရပ်လျက် ခြေတစ်ချောင်းထောက်။ ကျန်တစ်ချောင်းစီကို သုံးချောင်းထပ်လိမ်။ လိမ် ပုံက ပထမ တစ်ယောက်ရဲ့ ခြေချောင်းကို နောက်တစ်ယောက်ရဲ့ တစ်ချောင်းပေါ် ထပ်။ ကျန် တစ်ယောက်က သူ့ခြေချောင်းကို ဟို နှစ်ယောက်ခြေချောင်းနှစ်ခု အနက် အောက်က ခြေချောင်းကို အောက်က ထိုး၊ ပေါ်က ခြေချောင်းကို အပေါ်က ထိုး။ ဆီမီးခွက် ပုံစံရ။ ဖြုတ်လို့ ခက်ပြီး သုံးယောက် အတွဲလိုက်ဖြစ်။ ပြီးရင် ခုန်ရင်း၊ လှည့်ရင်း ဆိုရန်
မီးနဲ့ ရှို့ ပလိုက်ပြီ။
ဆင်ကြီးကိုးကောင် သောက်လို့ ကုန်ပြီ။
အဲလို ဆိုလို့ မပြီးခင် ခြေချောင်းအတွဲ ပြုတ်ရင် အဲဒီ သုံးယောက် ရှုံး။ နောက် သုံးယောက်စ။
တောင်ပေါ်က ရှမ်းကလေး လျော်ထမ်းလို့ပြေး. တိုတဲ့ လျော် က တို ..ရှည်တဲ့လျော်ကရှည်.။
ရွေလ မှာ ယုန်ဝပ်လို့ ဆန်ဖွပ်တဲ့ အဖိုးအို.
စနေ နဂါး၊ ချီးတွေ စား …
ရွှေဘကို ခြင်ထောင်ထောင် ဦးသိန်းမောင်
ကြာသာပတေးကြွက် နတ်ပြည်တက်မဟုတ်ဘူးလား ဟီးဟီး။ ကဗျာတွေက တော်တော်စုံနေတယ်။ စဉ်စားစရာ ကျန်တော့ဘူး။ :D
တောင်ပေါ်က သခွားသီး ဓါးကလေးနဲ့ပါးပါးလှီး။
ငါးပိရည်သောက် ဆားရည်သောက် စာကလေးအမွှေးနှုတ်။ ဗြုတ်။ ခရမ်းချဉ်သီး အရည်ညှစ်။ ဗျစ်။
ဟီးဟီး ဟုတ်လားမသိဘူး ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ အလိုဆိုတယ်။ ဝင်ပြီးလက်ဆော့သွားတယ်။ :)
တလုံး ဆွမ်းတော်တင် တလုံးရေထဲကျ
၀ါဆိုဝါခေါင် ရေဖောင်ဖောင် သပြေသီးမှည့်ကောက်ရအောင်
အမရေ မြန်မာပြည်ကိုမလွမ်းဘူးလား ..ဒီမှာမိုးတွေအရမ်းရွာတာပဲ
ကျွန်မက တနင်္လာသမီးဆိုတော့ တနင်္လာကျား နတ်ပြည်သွားကိုတော့ ကျွန်မလည်း လုံးဝ ထောက်ခံတယ်။ ကျွန်မက စကားပြေဆိုရင်တော့ အကုန်နီးပါး ပြန်ရွတ်ဖို့ မှတ်မိပေမယ့် ကဗျာက သိပ်ညံ့လို့ ခေါင်းထဲမှာ တပုဒ်လုံးကို မှတ်မိနေတာ သိပ်မကျန်တော့ဘူး။ သူငယ်တန်းတုန်းက ရွတ်ခဲ့တဲ့ ကဗျာတခုတော့ မှတ်မိနေတယ်။
ကျွန်မတို့ သူငယ်တန်းတုန်းက သင်တာ
က ကလေးငယ် ချစ်စဖွယ် မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်မ ရ တန်းရောက်တဲ့အချိန် စနစ်သစ် ပြောင်းမှ ကကညက် ပေမှာ ခြစ်ကနေ ကကလေးငယ် ချစ်စဖွယ် ဖြစ်သွားပါတယ်။ အရင်က ဆိုခဲ့တဲ့ ကကြီး ခခွေးကဗျာက..
က ကညက် ပေမှာခြစ်
ခ ခရာ အသံသာ
ဂ ဂဏန်း ရေမှာဖမ်း
င ငရုပ်စိမ်း စပ်ရှိန်းရှိန်း
ဆ ဆရာ ရိုသေပါ
ဇ ဇရပ်မှာ တည်းခိုပါ။
ည ညအခါ လသာသာ
တ တလင်းဝယ် စပါးနယ်
ထ ထမင်းနဲ့ တပို့တွဲ
ဒ ဒရယ်လေး ဘေးမဲ့ပေး
ဓ ဓနိပင် အသုံးဝင်
န နယုန် လေရူးသုန်
ပ ပလောင် ဒို့ညီနောင်
ဖ ဖရုံတော ဒို့ရွာတော
ဗ ဗလ အင်အားပြ
ဘ ဘရက် ရွှေဒေါင်းခွက်
လ လမင်း ထိန်ထိန်လင်း
၀ ၀ကလေး ၀ိုင်းဝိုင်းရေး
သ သမင် အပြေးလျင်
ဟ (ကျွန်မတို့ သူငယ်တန်းတုန်းက ဟအတွက် ကဗျာမရှိပါ။)
အ အလံ အောင်ပွဲခံ။
နောက်တခါ လာဖတ်ပါတယ်။ ဟိုခေတ်က မင်းသားမင်းသမီးတွေလည်း ပေါက်ကရကဗျာထဲ တော်တော်ထည့်အရွတ်ခံရရှာတယ်။ နောက်ထပ် မှတ်မိသေးတယ်
၀င်းဦးက မခံနိုင် ရဲဌာနကိုတိုင်
91 ကောမန့်မြောက်မှာ အားလုံးသိရက်နဲ့ မေ့ကျန်ခဲတဲ့ တပုဒ်ရေးပေးခဲ့မယ်။
အကျီ င်္ဆင်တူ ဘောင်းဘီဆင်တူ
အကျီ င်္ကွက်ကျား ဘောင်းဘီကွက်ကျား
အကျီ င်္နဲ့ ဘောင်းဘီ ၀မ်းဆက်ဝတ်ထားတဲ့ ကလေးချင်းတွေ့ရင်နောက်တဲ့ ကဗျာလေးပေါ့။
ကျမတို့တုန်းကတော့ ခွေးကလေးနဲ့ညားး လင်မယား လို့ ထည့်ဆိုလိုက်သေးးးးး
စိန်ပြေးတန်း မကစားမှီ အဲလိုလေးဆိုပြီး လက်ဝါး ကို မှောက်တဲ့သူ နဲ့ လှန်တဲ့သူ ခွဲပြီးကြတယ်
နောက်ဆုံးကျန်တဲ့ ၂ ယောက်ကို တစ်ယောက်က အစားဝင်ပေရင်
ပတ်စားဝင် ဆီဆွတ် .....တဲ့
ကြက်ဖခွပ်ရင် စာအုပ်ထဲလည်း သင်ရတဲ့
" ကြက်ဖတိန်ညင် တောကိုဝင်......"
အဲဒါဆိုရင်ဆောင့်ကြောင့်ထိုင် ခြေတဖက်စီ ဘေးထိုးခွပ်ရတယ်..
ဆိုရင် မတ်တပ်ရပ် ခါး နှစ်ဖက်ထောက်ပြီး ခြေတစ်ဖက်စီ ရှေ့ထိုးခွပ်ရတယ်။
သောက်ကြိုးနဲ ပေါက်တဲ့ဖင် တဲ့ ဟီဟိ။ ငယ်ငယ်က သယ်ယင်းတယောက် ဆိုပြတာ
မမချိုသင်း (၃)ပွဲတောင်လာစားတယ်။တကယ်ကြီး ? အမလေးပျော်စရာကြီး။ ဟဲဟဲ ။ဆိုင်ဖွင့်တော့မယ်။မမချိုသင်းတောင် ဒီလောက်စားရင်သူများတွေတော့...............မမ....အင်းစိန်ဈေးက အသက်၃၈ နှစ်လောက်ရှိတဲ့အကိုကြီးလေ။သူကကွမ်းအမြဲမြုံ့တယ
်လေ။ ၃ရုံနဲ့ ၄ ရုံကြားလောက်မှာခြင်းကြီးနဲ့ ဒုတ်ထိုးအမြဲရောင်းတယ်လေ။ သူ့ကိုမမသိလား? စားဖူးလား? အရမ်းကောင်းတာပဲလေ။ သူ့ဒုတ်ထိုးကို သတိရလိုက်တာ
to learn french language said...
ခွက်ကလပ်လပ် ကြွက် ပလပ်လပ်
စာလာဖတ်သူများ၊ ကွန်မန့် လာရေးပြီး ကိုယ်ငယ်ငယ်က ဆိုခဲ့ဖူးတဲ့ ပေါက်ကရ ချစ်စရာ ကဗျာလေးတွေ မျှဝေကြတဲ့ ဘလော့မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းများအား ကျေးဇူး အထူးတင်မိပါတယ်။
peace ဆိုတာ ၂ချောင်း
ချောင်း တာက သူခိုး
ခိုး တာက ပိုက်ဆံ
စန္နာ ကကျော်ဟိန်း မိန်းမ
မ တာက ဘုရား
ယား တာက ဝဲ
ဝဲ တာက စွန်
စွံ တာက မျက်စိ
ိစိ တာက သွား
သွား တာက သတ္တဝါ
ဝါ တာက နနွင်းမှုန့်
မှုန့် တာက မြေကြီး
ကြီး တာက ကြီးတော်
တော် တာက ဦးလေး
လေး တာက ကျောက်တုံး
တုံး တာက နင်
နင် တာက ထမင်း
မင်း တာက ဘုရင်
ယဉ် တာက လှတာ
လှ တာက ငါ။
အန်တီကြီး ကို မကြောက်လို့
ဆရာဝန်ကြီး အပ်နဲ့ထိုးလို့ -င်ရိုးကျိုးပါပြီ။
ရေးထားတဲ့ ပို့ စ်နဲ့ ကွန်မန့် တွေဖတ်ပြီး
သူငယ်ပြန်ချင်လာလို့ မနည်းအောင့်ထား၇တယ်း)
ကောင်းပါ့..အားလုံးကို Record လေးလုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်..
ကော်မန့် ၁၀၀ကျော်ကို ထပ်လာဖတ်ပြီး ရယ်သွားပါတယ်.. :D
အစ်မ မိုးချို ခင်ဗျာ... လင့်လေးယူသွားပါတယ်နော်....ကျွန်တော့်ကို အစ်မလင့်လေးယူသုံးခွင့်ပြုပါ......
ရောင်စုံဘောလုံး ~~~~ ရောင်စုံးဘောလုံး
တလုံးငါးပြား ~~~ တလုံးငါးပြား
ကြိုက်တဲ့အရောင်ရွေးပါ ~~~ ကြိုက်တဲ့အရောင်ရွေးပါ
တစ် နှစ် စာ ကိုချစ်
သုံး လေး မသိတာမေး
ငါး ခြောက် နှစ်ချင်းပေါက်
ခုနစ် ရှစ် (ဟီးးး ဘာလဲမသိဘူး မေ့သွားလို့ )
ကိုး တဆယ် ကြိုးစားမယ်
ဘယ်သူမှမရေးသေးတာဝင်ဖြည်.လိုက်မယ် ငယ်ငယ်က ဆင်တူဝတ်လာတဲ.ကလေးတွေဆို “အင်္ကျီဆင်တူဘောင်းဘီဆင်တူ ခွေးကလေးနဲ.တူ “ ဆိုပြီးလိုက်အော် ကြတာ “ တိုင်၁ လုံး ၅ကျပ် နင်းပါးငါချ ပိုက်ဆံငါးကျပ်ရ .“ ဟိဟိ ကျနော်တို.ခေတ်က ၅ကျပ်ဖြစ်သွားပြီ
“လာပါပြီ ကျွန်တော်များ ယောင်ဝါးဝါးနဲ့ပါ
ဟုတ်တာ မဟုတ်တာ အပထား
ကျွန်တော်က တော့ အခုထိ ပေါတုန်း ပေါ့
(အဲ့ဒါ ရည်းစားစာထဲမှာ ရေးတာ)
အခုတော့ ဆွေဇင်ထိုင် ငါးရောင်းနေရတယ်
သင်္ကြန်ခါတော် ရေကစားကြတာ ပျော်ရွှင်စရာ
စိုးမြတ်သူဇာရေကစားထွက်တာ BL မပါ
သူများတွေ လို ရေးချင်လို့ စဉ်းစားနေတာကြာပေါ့ အခုတော့ ပေါက်ကရ ကဗျာတွေ စဉ်းစားလို့ ရပြီ
တစ်ယောက်ယောက်က မဟုတ်တာလုပ်ရင် လူကြီးတွေ သိအောင်ပြောမယ်ဆိုပြီး ခြိမ်းခြောက်တဲ့ ကဗျာက
- တိုင်မယ်တိုင်မယ် အိမ်မြှောင်ကပ်နေတယ်
မတိုင်ဘူး မတိုင်ဘူး အိမ်မြှောင် မကပ်ဘူး။
- တိုင်တစ်လုံး တစ်မတ် မ၀ယ်နိုင် ပါးချ လခထုတ်မှ တစ်ကျပ်ရ။
တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ ရန်ဖြစ်ပြီးတော့ အဲဒီလူက လာပြန်ခေါ်ရင်တော့
- မခေါ်ပဲနဲ့ လာခေါ်တယ် ဂျောင်ဂျမ်းသီးစော် နံပါတယ်၊
ဂျောင်ဂျမ်းသီး ပုလွေမှုတ် ဟောဒီမှာ သရဲရုပ်။
ရန်ဖြစ်လို့ ကိုယ်က စရိုက်ချင်ရင်တော့-
ဦးသူချ အသူခံ လည်သူဆိတ် ဘေးသူကန် မကန်လေးချက် ကန်လေးချက် ၁ ၂ ၃ ၄ ဆိုပြီး ရိုက်လိုက်တာပဲ။း)
ရန်ဖြစ်ထားတဲ့သူက တံတွေးကို အသံထွက် ပြီး ထွေးလာရင်တော့-
ထွီထန် ကုလားမ ချီးစော်နံ လို့ ပြန်ပြောရတယ်။
ကတုံး တုံးထားတဲ့ လူဆိုရင်တော့
- ကတုံး ကတုံး အုံးခြစ်လုံး ရန်ကုန်မြို့ ကို ဆက်ပါအုံး ရန်ကုန်မြို့ က ဖုန်းကြိုး ပြတ် ကတုံးခေါင်းပေါ် အီးတုံးကပ်။
ဇီးကွက် မျက်ပြူး ရေထဲကူး ငါမသေဘူး ရေကူးတက်တယ်။
ပုဆိုး အဆင်ကို လိုက်ပြီး လူနာမည်ခေါ်တာကြတော့
- ပုဆိုး ပြာနဲ့ ကိုဖိုး တာ၊ ပုဆိုးကွက်နဲ့ ကိုဖိုးသက်၊ ပုဆိုးနီနဲ့ ကိုဖိုး ကြည်၊ပုဆိုးစိမ်းနဲ့ ကိုဖိုးသိန်း၊ ပုဆိုးကြားနဲ့ ကိုဖိုး ခွား။
ဖန်ခုန်ရင် ရွတ်တဲ့ ကဗျာကတော့-
ကလင်ကလောင်ကလက် ချဉ်ပေါင်ရွတ် ဟင်းချက်။
ဟိ.. အားလုံးရွတ်ဖူးတယ် ငယ်ငယ်က.. :D
တနင်္လာကျား နတ်ပြည်သွား နတ်သမီးလေးနဲ့ညား။
ဟောလို့မသေ သံပုရာရည် တောင်ပေါ်ကသခွါးသီး ဓါးနဲ့ပါးပါးလှီး အီး.. တဲ့
တစ်နာရီ ကျပ်သုံးဆယ် ကတုံးဖင်ခေါင်းကျယ်..။
ဒါဆို ဆက်ချင်သေးရင်ရ၏.. ဒီလို
လုံးတာကကျောက်တုံး၊ တုံးတာ နင်
ယင်တာက ယင်ကောင်၊ (မရတော့ဘူး မေ့ပြီ)
ဖောင်းတဲ့ဖားကဖောင်း (အမြန် ၃ခေါက်ဆိုရန်)
ခွက်ပိုးလိုးပက်လက်၊ ကြွက်ပိုးလိုးပက်လက် (အမြန်ရွတ်ရန်)
ဖေဖေလာရင် ခွေးနဲ့ရှူးတိုက်မယ်.. :D
အဲ.. လုပ်ကာမှ ငယ်ဘ၀ကို သတိရသွားပြန်ပြီဗျာ
အမရေ... အမမရေးတာကြာလို့ အမစာပြန်ရေးအောင် တဂ်ထားပါတယ်။
မိဘပြည်သူများ စိတ်ပူပင် သောကရောက်နေကြရပါကြောင်း...
အမ ခွင့်ရက်က စပယ်ရှယ်ခွင့်ထင်တယ်၊ အကြာကြီးပဲနော်။
သတိယနေပြီ၊ နူးညံ့စေတဲ့ စာကို ဖတ်ချင်လှပြီလေ။
အင်း..ကွန်မင့်တွေကလည်းများလိုက်တာ ဘာရေးရမှန်းတောင် မသိတော့ဘူး ဘာမှမရေးတာပဲ ကောင်းမလားမသိဘူး အင်း တနင်္ဂနွေဂဠုန် အီးတွေငုံဆိုတာကိုတော့ အပြည့်အ၀ ကန့်ကွက်တယ် တနင်္ဂနွေ ဂဠုန် မော်ဒယ်တွေအုံ ဆိုမဆိုးဘူး အဟဲ ကျနော်က တနင်္ဂနွေသားလေ..
Ma Ma....we had slightly different version when we were young. I switched from 'စ' to ' သ' as I don't want it to be inappropriate on your wall. ဟီးဟီး :D
ပြီးတော့ အားလုံးမေ့နေတာလေးကို ဝင်ရေးသွားတယ် ဘယ်ရမလဲ
အေ ဘီ စီ ဒီ မတက်ဘဲနဲ
အမ အပေါ်က jan ဆိုတာကျနော်ပဲနော်
မမိုးချိုသင်းရေ... အခုမှ ဒီပိုစ့်လေးကို ဖတ်ဖြစ်လို့ အခုမှဘဲ ရေးလိုက်ရပါတယ်။ တော်တော်လေးတော့ နောက်ကျနေတဲ့ ကော်မန့်ပါဘဲ။ ဒါပေမဲ့ ဖတ်ပြီးတော့ မရေးဘဲမနေနိုင်တာနဲ့ဘဲရေးဖြစ်သွားပါတယ်။ ငယ်ငယ် တုံးက အချိန်လေးတွေကိုလဲ အရမ်းကိုလွမ်းမိ သွားလို့ပါ။ အဲဒီ ကဗျာတွေအားလုံး (ကော်မန့်တွေ ထဲက ကဗျာတွေ အားလုံးပါ ပါပါတယ်) ကို ငယ်ငယ် တုံးက ရလဲရခဲ့ အားရပါးရလဲ ဆိုခဲ့ဖူးပါတယ်။ အတော် များများကိုလဲ အခုအချိန်ထိ မှတ်မိနေတုံးပါဘဲ။ အဲဒီခေတ်တုံးက ကလေးတိုင်းလိုလိုလဲ အဲဒီ ပေါက်ကရ ကဗျာလေးတွေအားလုံးနဲ့ ရင်းနှီးခဲ့ကြပါတယ်။ ကလေး အားလုံးဟာ တပျော်တပါးကို ဆိုခဲ့ကြတာပါ။ ပျော်စရာ အကောင်းဆုံး အချိန်လေးတွေပါဘဲ။ အခုခေတ် ကလေး တွေကိုတော့ အတော်ကြီးကို သနားမိပါတယ်။ သူတို့ခမျာ တွေမှာ အဲဒီလိုဆိုစရာ ကဗျာတွေမရှိ တော့ပါဘူး။ ဟိုခေတ်တုံးက ကလေးတွေလို ကဗျာဆိုပြီး တပျော်တပါးဆော့ဖို့လို့လဲ အချိန်မရှိရှာကြ တော့ပါဘူး။ ကဗျာဆိုဖို့ ဝေးလို့ ထုပ်စည်းတိုးတယ် ဆိုတာတောင် ဘာမှန်းမသိကြတဲ့ ကလေးတွေ ဖြစ်နေကြ ပါပြီ။
ငယ်ငယ်တုံးက ဆိုခဲ့တဲ့ ကဗျာလေးတစ်ချို့ ထပ်ရေးပေး လိုက်ပါတယ်။
~~~ ကကြီး ခခွေး အိမ်ကိုပြေး
~~ သစ်ပင်ပေါ်မှာ ထိုင်နေတဲ့ တောက်တဲ့ တောက်တဲ့
မိုးလေ၀သ ဟောနိုင်တဲ့ တောက်တဲ့ တောက်တဲ့
မိုးရွာမလားတောက်တဲ့ အိုတောက်တဲ့။ (ဒီကဗျာ ကိုက သံစဉ်လေးနဲ့ သီချင်းဆိုသလို ဆိုတာပါ)
~~ ခါချဉ်စစ်တပ် ချီတက်လာ
တောက်တဲ့ မြီးတို သီချင်းဆို
ကြက်ဖို ကြက်မ နှစ်ပါးသွား
ဇီးကွက် ဖိုမ အော်လို့သာ
ခွေးစုတ်မကြီး ငိုချင်းချတယ်လေး.....။ ။
အဲဒီကဗျာကိုဆိုရင် မျက်စိထဲမှာ အဲဒီထဲက တိရစ္ဆန် ဒုက္ခိတ တွေကိုပါ မျက်စိထဲမှာမြင်ယောင်သေးတာ.... နောက်ဆုံး ခွေးစုတ်မကြီး ငိုချင်းချတဲ့ အထိဘဲဆိုပါတော့
စဉ်းစားမိရင် အခုအချိန်ထိ ရီချင်သေးတယ်။
ကျေးဇူးပါဘဲ မမိုးချိုသင်းရေ ပျော်စရာကောင်းတဲ့ ငယ်ဘ၀လေးတွေကို ပြန်ပြီးအမှတ်တရဖြစ်စေခဲ့တဲ့ အတွက်ပေါ့။